Atgbọ njem na Columbretes Islands | Njem zuru oke
Bogbọ mmiri na-eme njem na Columbretes Islands
Dị ka anyị kwurula na ọtụtụ oge ndị Agwaetiti Columbreste ha guzo dị ka otu n’ime ebe kachasị mma na mpaghara oke osimiri Mediterenian dum. N'ihi ya ụgbọ mmiri njem na Islands bụ ihe na-eme mgbe niile.
Illa Grossa na Columbretes
Iru a paradise ụwa ebe eri mmadu na naanị ihe na-aghọ a ndụ bi, ọ dịghị ihe dị mma karịa na-ahapụ site na ọdụ ụgbọ mmiri nke Peñíscola ma ọ bụ site na Oropesa del Mar n'ime otu n'ime ụgbọ mmiri ndị na-enye njem a iji ruo osimiri Iden.
A na-enyekarị ndị a ngafe ahụ n’oge ọkọchị na, ọkachasị, ụgbọ mmiri ndị ga-akpọga gị n’agwaetiti ndị a bụ: Golondrina de Peñíscola, Goleta de San Sebastián, Olimpia Boat na Super Bonanza. Ọzọkwa na Oropesa del Mar Enwere ụfọdụ njem na ebe a n'ihi Chatermarítimo na Azahar Diving Center, nke na-enyekwa nduzi maka ụzọ gasị site n'oké osimiri dị egwu.
Ozugbo anyi rutere ebe anyi na-aga, ihe anyị masịrị anyị bụ naanị L'Illa Grossa, naanị akụkụ nke agwaetiti anyị nwere ike iji ụkwụ kpuchie, na ije mara mma ụlọ ọkụ. N'ime oge njem ahụ ọ ga - ekwe omume ịmasị ahịrị dị egwu nke na - eweta agwaetiti ahụ, ọtụtụ ihe ndị na - asọ oyi nke jupụtara na bọmbụ mgbawa ojii, yana ahịhịa na anụmanụ ndị bara ọgaranya n'ụdị ala pụrụ iche n'ụwa.
Lightlọ ọkụ Columbretes Islands
Y’oburu n’ichoo iru ya Ogige Ntụrụndụ Columbretes Site n'ụgbọ nke gị, anyị na-agwa gị na ohere a bụ n'efu maka ụgbọ mmiri ndị ahụ ruru mita iri abụọ na ise n'ogologo, nke nwere ike ịga ebe ọzọ. L'Illa Grossa, na Ferrera na Foradada n’enweghị ihe egwu nye oke osimiri. N'ezie, cheta na amachibidoro iji arịlịka eme ihe yana na ọ ga-adị mma ịkpọtụrụ Reserve Nursery site na ọwa nke 9 nke ụgbọ mmiri ahụ.
Maka ozi ndị ọzọ, egbula oge ịga Ogige okike nke obodo Valencian.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịhapụ Peñíscola, anyị na-akwado ka ị gaa na tamarindos.net ma ọ bụrụ na ị chọọ ime ya site na Oropesa del Mar ị ga-achọta ozi ndị ọzọ na oropesadelmar.es
Foto site na: Flickr
Pathzọ zuru ezu na edemede: Njem zuru oke » Bogbọ mmiri na-eme njem na Columbretes Islands
Ọ ga-amasị m ileta agwaetiti Colmbretes na June a, anyị ga - anọ n'etiti mmadụ iri na abụọ na iri na anọ, ime emume ncheta ọmụmụ ụbọchị mbụ na ndị na - amaghị ha, echere m na mmadụ ga-achọ ịga mmiri, mana ọ bụ karịrị ihe ọ bụla ileta agwaetiti. Ọ ga-amasị m ịnweta enyemaka na mgbazinye ụgbọ mmiri ma ọ bụ njem njem gaa agwaetiti na karịa ọnụego niile .... Daalụ nke ukwuu na ekele
Ezi! Enwere m mmasị ịme njem a, ọ ga-abụ July 24-25, maka mụ na nwunye m, ka m hụ ma mmadụ ọ nwere ike inye m ibe weebụ ma ọ bụ ebe m ga-aga, ekele m
pdicicia, ekwentị ndị a ị tinyere ebe ahụ, ebe ha si? Daalụ
Ọ ga-amasị m ịga njem mmụta na agwaetiti ahụ, anyị bụ mmadụ anọ toro eto na ụmụaka atọ.
Anyị ga-achọ izu a ka enwe ike.
Ọ ga-amasị m ịmata ego njem ahụ
Anyị bụ mmadụ 100 chọrọ ịbịkọta ịga leta Columbretes.
Ọ ga-ekwe omume?
Ego ole ka ọ ga-efu anyị?
Datebọchị doro anya ma ọ bụrụ na Eprel ma ọ bụ August.
Daalụ, ana m echere azịza gị.
Ọ ga-amasị anyị isi n'ọdụ ụgbọ mmiri Castellón pụọ.
Ọ bụ Viktor Borisov dijo
Do maara ihe ị na-eme, ya mere nọgidenụ na ya.
Zaghachi Viktor Borisov
Ndewo, ọ ga-amasị m ịga leta Columbretes Islands n'oge Ista. Ọ ga-ekwe omume? Kedu ka m ga-esi mee ya? Daalụ
Ndewo, achọrọ m ịga leta Columbretes Islands, ọ ga - ekwe omume Ista a?
Zaghachi ka olga
Anyị ga-achọ iso ụfọdụ ndị enyi gaa kọlụm na ngwụcha izu nke June 24,25, 2011 na m ga-achọ ịma oge elekere na ego ole. Ọ ga-amasị anyị isi na Grao de Castellon pụọ. Enwere njem mmụta na Sọnde? Kedu usoro oge?
Echiche kacha mma. Sara
You nwere ike ịgwa m oge ọpụpụ na Columbretes Islands ị nwere maka izu na-abịa, ọpụpụ nke Castellon. Anyị bụ obere ìgwè ma anyị nwekwara mmasị na ọnụego ị nwere.
hello n'ọdụ ụgbọ mmiri castellon catamaran na-agbaziri iji gaa na columbretes Islands kacha 12 mmadụ ezigbo ahịa na-ịgbaziri agbaziri kwa ụbọchị ma ọ bụ kwa kilomita kọntaktị ekwentị 667412037 website chartercolumbretes.com
ọnụahịa na oge awa maka mmadụ 4 n'izu a ma ọ bụ nke na-esote
Onwere onye mara nọmba ekwentị ndoputa maka njem a site na Oropesa ???
Ndewo, m ga-achọ ịma otu m ga-esi were ọrụ were gaa Illes Columbretes si Grao Castelló ma ọ bụ site na Puerto Burriana. Maka mmadụ ise. Ọ ka mma ma ọ bụrụ n'ụgbọ mmiri "loro" ma ọ bụ ihe yiri ya karịa ịnara ụgbọ mmiri naanị anyị. Daalụ.
Miguel Rubio Andres kwuru dijo
Ndewo, ọ ga-amasị m ịchọpụta maka ohere ịme ụgbọ mmiri na les columbretes. Anyị nọ na Acocebre na m ga-achọ ịma ma ọ bụrụ na izu nke July 9 ruo 13, 2012 anyị nwere ike ịhazi ya. Achọrọ m ịma ahịa, mº nke ndị nwere ike ịga… .. Daalụ nke ukwuu
Zaghachi Miguel Rubio Andres
Ọ ga-amasị m ileta agwaetiti ma ọ ga-amasị m ịmata ọnụahịa maka mmadụ 2.
Ndewo anyi choro isi na CASTELLON gaa na COLUMBRETES ISLANDS UGBUA NGBA
Mª Teresa Muñoz Moya dijo
Ndewo, aga m aga Oropesa ụbọchị ole na ole n'oge Ista, ọ ga-amasị m ịga na Columbretes Island, m ga-achọ ịma ọnụahịa na oge ọpụpụ nke njem iji gaa leta ha.
Zaghachi Mª Teresa Muñoz Moya
Ndewo, m ga-achọ ịma ma enwere ụgbọ mmiri na-ahapụ Grao de Castellón na Holy Week na Columbretes Islands na ọnụahịa ahụ.
Enwere mmadụ abụọ ma anyị ga-achọ ịga Columbretes maka izu nke izu a ma ọ bụ izu na-abịa.
Anyị chọrọ ịpụ.
Daalụ, I meela nke ukwuu.
Ọ ga-amasị m ileta ha na ngwụsị izu nke August 23 ma ọ bụ 24, 2014, ị nwere ike ịgwa m oge na ọnụahịa yana ihe njem mmụta a gụnyere ịhapụ Peñiscola, oge njem ahụ ga-atọkwa ụtọ.
Daalụ. Ekele Pepe.
Ezi ehihie anyị bụ di na nwunye na anyị chọrọ ịga-anọ ụbọchị na agwaetiti na anyị ga-ahapụ Castellón, ihe ahịa ha ga-enwe… .. ,, ?? Daalụ
Ọzara Candelaria dị na Boyacá
Obodo Taino na Matanzas, lee anya n'oge gara aga